के पानी पनि बासी हुन्छ? - KalaiyaLive.Com.Np
बजारमा पनि पानी पाइएन, धाराबाट पनि पानी आउँदैन! त्यसपछि निराश हुँदै कोठामै बस्नुभयो र एक्कासी कोठाको एक कुनामा महिनौँ दिन देखिको पानीको बोत्तल देख्नुभयो। तिर्खा लागिराखेको छ, तर ३/४ महिनाको बासी पानी छ। अब, तपाईँले आफैलाई सोध्नुहुन्छ, “के पानी पनि बासी हुन्छ र?” यो प्रश्न सबैको दिमागमा एक न एकचोटी अवश्य उठ्ने गर्दछ। दूध त केहि घण्टामा नै अमिलो हुँदै जान्छ, फलफूलको जुस पनि केहि समयपछि बिग्रिन्छ, तर के पानी बिग्रन्छ?
“के बासी पानी पिउन हुन्छ?”
हुन्छ! यदि पानी सफा छ र ढाकेर राखेको छ भने त्यो पानी पिउन मिल्छ। तर धाराको पानीमा केहि जैविक पदार्थहरू हुने गर्दछन्, तैपनि त्यो पानीलाई कुनै विषालु रसायन ननिकाल्ने भाँडामा राखिएको छ भने वर्षौँसम्म पनि पिउन योग्य हुन्छ।
त्यसो भए पानीको बोत्तलमा ‘एक्सपाइरी डेट’ किन राखिन्छ ?
य कुरा पानी राखिएको भाँडामा भर पर्ने कुरा हो। पानी राख्ने भाँडाले लामो समय पछि केही रसायन निकाल्दछ भने, त्यस्तो भाडामा राखिएको पानीको गुण परिवर्तन हुन्छ। थोरै समयमा पानीको स्वादलाई बिगार्दछ भने लामो समयसम्ममा पानीलाई विषालु पनि बनाइदिन सक्छ।bottled-water
बजारमा पाइने पानीको बोत्तल प्लास्टिकबाट बनेको हुन्छ र प्लास्टिकको बोत्तलमा राखिएको पानीमा लामो समयपछि नराम्रो दुर्गन्ध पैदा हुने हुन्छ। त्यसमाथि प्लास्टिकको भाँडाहरूले बाहिरको गन्धलाई छेक्न सक्दैन। यदि प्लास्टिकको बोत्तलमा पानी राखेर ग्यारेजमा लामोसमयसम्म राख्ने हो भने, त्यस पानीको गन्ध हलुका तेल जस्तो हुन जान्छ। त्यसैले गर्दा नै पानीको बोत्तलमा एक्सपाइरी डेट राखिएको हुन्छ। किनभने पानी जति सफा भएपनि, पिउँदा ठ्वाँस्स गन्हायो भने पिएको पानी पनि ओकाल्न मनलाग्छ।
कस्तो भाँडामा राखिएको पानी लामो समयसम्म पिउन योग्य हुन्छ?
प्लास्टिकको भाँडाबाट राखिएको पानी लामो समयसम्म नखाँदा नै राम्रो। त्यसमा राखिएको पानी पिउन योग्य भएपनि त्यसको स्वाद बिग्रने हुन्छ। तर यदि धेरै पहिलेको सीसाको बोत्तलमा पानी छ र बोत्तलको बिर्को पनि लगाइएको छ भने, त्यो पानी अवश्य पनि पिउन योग्य हुन्छ, साथै स्वादमा पनि कुनै फरक पर्दैन। किनभने, प्लास्टिकको बोत्तलमा जस्तो सीसाको बोत्तलमा दुर्गन्ध आउदैन। अनि सीसा र पानीको पनि कुनै रसायनिक प्रतिक्रिया नहुने कारणले गर्दा यसमा राखिएको पानी धेरै लामो समयसम्म पनि पिउन लायक हुन्छ।
तर, विचार गरौँ!!
कुनै पनि भाँडामा धेरै समयसम्म पानी राखिएको छ भने, त्यसमा लेउ लागेको हुनसक्छ र पानीको पिँधमा थिग्रिएर बसेको हुन सक्छ। त्यसैले लामो समयसम्म बोत्तलमा राखिएको पानी पिउनै पर्यो भने पहिले त्यो पानीलाई नियालेर हेर्नुहोस्। त्यसमा धुलोका कणहरू, कुनै किसिमको फोहोर अथवा लेउ लागेको छ कि छैन, विचार गर्नुहोस्।
अर्को साधारण उपाय भनेको, बोत्तलको बिर्को लगाएर पानीलाई मज्जाले हल्लाउनुहोस्। हल्लाउँदा यदि पानीबाट फिँजजस्तो निस्केको छैन भने त्यो पानी पिउन योग्य हुन्छ तर फिँज निस्केको छ भने नपिउँदा नै उचित हुन्छ।
त्यसो भए, के पानी बासी हुन्छ?
यसको सहि उत्तर भनेको पानी राखिएको भाँडा र समयमा नै भर पर्ने कुरा हो। प्लास्टिककै बोत्तलमा राखिएको भएतापनि धेरै लामो समयको बासी होइन भने त्यो पानी पिउन योग्य हुन्छ, तर स्वादमा धेरै आकांक्षा भने नगर्नुहोस्। नेपाली हेडलाइन्सबाट
The post के पानी पनि बासी हुन्छ? appeared first on Purbeli News.